जानकारी Archives - Page 32 of 32 - कृषि पत्रिका
आइतबार १२ असार, २०७३
पाकेको आँपमासोडियम, पोटासियम, ताम्र, गन्धक, म्याग्नेसियम, क्लोरोन तथा नियासिन पाइन्छ । यसका फाइदा यस्ता छन् । १. आँप एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त हुन्छ, जसले स्तन क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर कोलोन क्यान्सर तथा ल्युकेमियाबाट बचाउँछ । २. यसमा हुने भिटामिन ए र रेटिनोलले आँखाको शक्ति बढाउछ । ३. आँपमा हुने फाइबर र भिटामिन सीको प्रचूर मात्राले लिपो प्रोटिनको कम उपस्थितिलाई […]
तराईमा फलाउन सकिने कागतीका नयाँ जात
धनकुटा। राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपात्ले धनकुटाले तराईका लागि कागतीका २ नयाँ जात सिफारिस गरेको छ । ६ वर्ष लामो अनुसन्धानपछि केन्द्रले तराईमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिने एनसी आरपी ४९ र एनसी आरपी ५५ जातका नयाँ कागती सिफारिस गरेको हो । ३ वर्षयता झापा, मोरङ, सुनसरी र चितवन जिल्लामा कागतीका स्थानीय जातको व्यावसायिक खेती सुरु […]
तितो स्वाद भएको करेलामा मानिसको जीवनको रहस्य लुकेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । यसको तरकारी तथा जुस पिनाले कहियाँै रोगहरुबाट मुक्त बनाउँछ । स्वास सम्बन्धि रोगलाई टाढा राख्छः तितेकरेलाको नियमित सेवनले स्वास सम्बन्धि विभिन्न किसिमका रोगबाट टाढा राख्ने काम गर्छ । यसको सेवनले अस्थमा, सर्दी, प्रत्येक दिन विहान करेला र तुलसीका पातलाई पिसेर महसँग […]
बहु उपयोगी सिस्नोको फाईदा मान्छे देखि पशुपन्छी सम्म
सिस्नोको नाम सुन्नासाथ हामी हरियो पात भएको काँडे घाँसलाई सम्झिन्छौ । सिस्नो सँग परिचित भएकाले त अझै यसलाई पोल्ने घाँसका रुपमा चिन्दछन् । हालैको एउटा अनुसन्धानले हाम्रो गाउँघर तिर झाँडीमा पाइने सिस्नु मानव स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभई जीवजन्तुको लागि पनि बहुउपयोगी रहेको सुझाव अगाडी सारेको छ । अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा सुप, तरकारी, चिया, जुस, औषधि […]
गाँजरमा उच्चमात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । यो आँखा, छाला, पाचन प्रणाली र दाँतका लागि लाभदायी हुन्छ । यसमा अत्यन्त न्युन मात्रामा क्यालोरी पाइन्छ भने चिल्लो पदार्थ शुन्य हुन्छ । गाँजरका फाइदाहरु : रतन्धो हुनबाट बचाउछ : गाँजर खानु आँखाको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ । यसमा […]
बन्दा तरकारीका अलावा सलादका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसमा कैयौं औषधीय गुण हुन्छन्, जसले हामीहरुलाई निरोगी बनाउँछ । बन्दा सेवनबाट हुने फाइदा : कब्जियतबाट छुटकारा : ताजा बन्दामा नुन, मरिच तथा कागतीको रस मिसाएर दैनिक बिहान खाली पेटमा खानाले २, ४ हप्तामै कब्जियतको समस्या समाधान हुन्छ । पेटका लागि उपयोगी : ताजा बन्दको रसमा […]